ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်(သာသနာဟိတအသင်း) - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
အသင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သာသနာအထောက်အကူပြု လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဖြစ်သည်။
(၁) စာသင်တိုက်များသို့ လှူဒါန်းခြင်း
(၂) တရားစခန်း(ရိပ်သာ)များသို့ လှူဒါန်းခြင်း
(၄) ကလေးလူငယ်များ ဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံ ယဉ်ကျေးမှူ့ သင်တန်းဖွင့်လှစ် သင်ကြားနိုင်ရေး အတွက်ထောက်ပံ့ခြင်း စသည့် သာသနာ အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းစဉ်များ၌
နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှု= Mar 11, 2015
တရားပေါင်းကား ရဟန်းတို့ တရားမနာ ၊
စာပေမသင်၊ နှုတ်တွင်မဆောင်၊ သိအောင်မပြု ၊
ဓမ္မာနုဓမ္မ ပဋိပတ်ကွာ ဤငါးဖြာတည်း။
ကျယ်စွမအံ၊ မကြံမစည်၊ ဤငါးမည်တည်း။
ဆုံးမမယူ ၊ စာချသူရှား၊ လာဘ်များအောင်ကြံ၊
(၄) ကလေးလူငယ်များ ဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံ ယဉ်ကျေးမှူ့ သင်တန်းဖွင့်လှစ် သင်ကြားနိုင်ရေး အတွက်ထောက်ပံ့ခြင်း
(၁)အလှည့်ကျစနစ်ဖြင့် ကျင်းပလှူဒါန်းပေးခြင်း (ကျင်းပလှူဒါန်းခြင်း မရှိသော ပြည်နယ်၊ တိုင်း နှင့် မြို့နယ်ဒေသများကို အလှည့်ကျရွေးချယ်မည်။
(၂)အသင်းဝင်များအနေဖြင့် မိမိပြည်နယ်၊ မိမိတိုင်းဒေသမှာ ကျင်းပခွင့်ရအောင် သာသနာဟိတအသင်းနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လိုအပ်သည့်အကူအညီများ ပံ့ပိုးနိုင်ရန်လိုအပ်မည်။(ငွေကြေးမဟုတ် လုပ်အားအကူအညီ)
(၃)စာသင်တိုက်များ ၊တရားစခန်း(ရိပ်သာ)များ၊လူငယ် ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းများ၊ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းများသို့ ထောက်ပံ့လှူဒါန်းခြင်း နှင့် တရားပွဲကျင်းပခြင်း စသည့် ဘာသာရေးအထောက်အကူပြု လုပ်ငန်းစဉ်များ၌ ပါဝင်လှူဒါန်း ကျင်းပပြုလုပ်ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
(၁)သာသနာပရဟိတ အသင်းဝင်များအနေဖြင့် နှစ်စဉ်ကြေးငွေ-10000/-(ကျပ်တစ်သောင်းတိတိ)ကို နှစ်စဉ်(၁၂)လပိုင်း၊(ဒီဇင်ဘာလ)မကုန်မီ နောက်ဆုံးထား ထည့်ဝင်လှူဒါန်းရမည်။(မှတ်ချက်-ရဟန်း ၊သာမဏေများ မပါ။)
(၂)အလှူငွေကောက်ခံခြင်း ဖြတ်ပိုင်းစာအုပ်များကို ရန်ကုန်(အကျိုးတော်ဆောင်များ) နှင့် ကျင်းပခွင့်ရ ပြည်နယ်/တိုင်း အကျိုးဆောင်ကို်ယ်စားလှယ်များ နှင့် တာဝန်ယူနိုင်သည့် အဖွဲ့ဝင်များကိုသာ ပေးအပ်ကောက်ခံစေမည်။
(၃)ဖြတ်ပိုင်းစာအုပ် ကိုင်ဆောင်သူများသည် မိမိတာဝန်ယူကောက်ခံသော ငွေကြေးကိစ္စအရပ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ တာဝန်အပြည့်အ၀ယူရမည်။
(၄)ငွေကြေးကောက်ခံသူ အကျိုးတော်ဆောင်များသည် မိမိလက်ခံရရှိသည့် လှူဒါန်းငွေများကို အသင်းဆိုဒ်စာမျက်နှာတွင် ထည့်သွင်းဖေါ်ပြပေးနိုင်ရင် ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မေးလ်ပို့၍ဖြစ်စေ ၊ကော်မန်းပေး၍ဖြစ်စေ..အသိပေးအပ်ရမည်။
(၂)မောင်နိုင်မင်း =၅သောင်းကျပ် (မလေးရှား)
(၄)ကိုလှမိုး (ဒါန-ဆစ်ဒနီ) မှ=၁သိန်းကျပ် (သြစတြေးလျ)
(၅)မလွမ်းဧကရီ မှ =၂သောင်း ၅ထောင်ကျပ် (မြန်မာနိုင်ငံ)
(၆) ကိုကျော်မိုးဦး မှ = ၁သောင်း ၅ထောင် (မြန်မာနိုင်ငံ)
(၇)မအေးအေးအောင် မိသားစုမှ = ၁သိန်းကျပ် (ခေတ္တဂျပန်)
(၈)ကိုအောင်ကိုမျိုး မှ =၃သိန်းကျပ် (ခေတ္တဂျပန်)
(၉)ကိုသန်းထိုက်စိုး မှ = ၃သိန်းကျပ် (ခေတ္တဂျပန်)
(၁၀) အရှင်ဥတ္တမ( တာချီလိတ်)မှ = ၅သောင်းကျပ် (မြန်မာနိုင်ငံ)
(၁၁) မရွဲမြတ်တင်မှ = ၂သောင်း ၅ထောင် (မြန်မာနိုင်ငံ)
(၁၂) မမြင့်မြင့်စန်း မှ = ၅ သောင်းကျပ် (ခေတ္တ-USA)
(၁၃) ဒေါ်မေကျော့ရှင်း (ကလေးတို့ ဆရာမ) မှ = ၅ သောင်းကျပ် (ဘန်ကောက်)
(၁၄) ကိုဇော်မင်းထွန်း မှ = ၅ သောင်းကျပ်
(၁၅) ဦးထွန်းရင် + ဒေါ်ကြည်ကြည် (ဘန်ကောက်-သင်္ဃန်းကျွန်း) မှ = ၁၀ သိန်းကျပ်
(၁၆) မသက်သက်ဦး မှ = ၁ သောင်းကျပ်
(၁၇) ကိုချစ် + မတင်တင် ပေါင်းတည် မှ=၃ သောင်းကျပ်
(၁၈) ဦးမင်းသူ ( ဘန်ကောက် ) မှ =၁၀ သိန်းကျပ်
မတည်ရရှိငွေ စုစုပေါင်း=3305000ကျပ်(၃၃ သိန်း ၅ထောင်ကျပ်တိတိ)
-အလှူခံဖြတ်ပိုင်းဘောက်ချာ (၁၀၀) ရိုက်နှိပ်ခြင်းအတွက် =35000
-ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ(၁၀၀) ထပ်မံရိုက်နှိပ်ခြင်း အတွက် =40000
-အသင်းတီရှပ်(၁၀၀) ရိုက်နှိပ်ခြင်း အတွက် = 150000
-အလှူ ခံဖြတ်ပိုင်းဘောက်ချာ(၁၅၀) ထပ်မံရိုက်နှိပ်ခြင်းအတွက် =40000
-ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းလွှာ (၅၀) ထပ်မံရိုက်နှိပ်ခြင်းအတွက် =30000
-လက်ကမ်းစာစောင် (၁၀၀) ရိုက်နှိပ်ခြင်းအတွက် =40000
-အထွေထွေ ကုန်ကျငွေ =20000
ထုတ်ယူသုံးစွဲထားငွေ စုစုပေါင်းမှာ = 395000
နေရပ်လိပ်စာ =မလေးရှား(ဂျိုဟိုး)(Jalan AYU 34 81800 Ulu Tiram )
ဖုန်းနံပါတ် =0060108869450 (0108869450)
facebook လိပ်စာ = http://www.facebook.com/buddhismworld
လှိုင်ကျော်ထွေး ၊မှတ်ပုံတင်နံပါတ်.12/ဥကတ(နိုင်) 148171 ၊ ဖုန်းနံပါတ် . 0949260352 လိပ်မူပေးပို့၍ဖြစ်စေ လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း နိုးဆော် အသိပေးအပ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓကမ္ဘာသာသနာဟိတ အသင်းအလှူငွေ ထိန်သိမ်းရေးတာဝန်ခံများ
စတင်ရေးသားခဲ့သူ A BuddhismworldAdmin. ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးချက် မှာ ရှင်ပညာဇောတ Nov 29, 2013. 10 Replies2Likes
စတင်ရေးသားခဲ့သူ A BuddhismworldAdmin. ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးချက် မှာ Moe Jul 8, 2013.5Replies0Likes
ဆွေးနွေးချက်စတင်ရေးသားသူ လှိုင်ကျော်ထွေး Feb 22, 2013.0Replies 1 Like
စတင်ရေးသားခဲ့သူ A BuddhismworldAdmin. ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးချက် မှာ A BuddhismworldAdmin Nov 11, 2012. 10 Replies0Likes
အသင်းမန်ဘာဝင်များမှ အသင်းဝင်ကြေးအဖြစ် ငွေကျပ်-၁၀၀၀၀ကို ထည့်ဝင်လှူဒါန်းကြသူများစာရင်း
ဆွေးနွေးချက်စတင်ရေးသားသူ လှိုင်ကျော်ထွေး Jul 31, 2012.0Replies0Likes
စတင်ရေးသားခဲ့သူ A BuddhismworldAdmin. ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးချက် မှာ A BuddhismworldAdmin မေ 2, 2012. 11 Replies 1 Like
ကန့်သတ်မှုမရှိ သဒ္ဓါထက်သန်သလောက် လှူဒါန်းငွေစာရင်း(ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ)
စတင်ရေးသားခဲ့သူ လှိုင်ကျော်ထွေး. ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးချက် မှာ လှိုင်ကျော်ထွေး Apr 23, 2012.4Replies 1 Like
စတင်ရေးသားခဲ့သူ A BuddhismworldAdmin. ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးချက် မှာ 0rotmcd6qjael Mar 6, 2012.5Replies 1 Like
စတင်ရေးသားခဲ့သူ A BuddhismworldAdmin. ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးချက် မှာ 0rotmcd6qjael Feb 24, 2012.2Replies0Likes
ဆွေးနွေးချက်စတင်ရေးသားသူ A BuddhismworldAdmin Feb 13, 2012.0Replies0Likes
ဆွေးနွေးချက်စတင်ရေးသားသူ A BuddhismworldAdmin Feb 12, 2012.0Replies0Likes
ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်(သာသနာဟိတအသင်း) သို့အဖွဲ့ဝင်ပြီးမှ မှတ်ချက်များကိုရေးသားနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
နီစံ (အနီ) သည်ှဧပြီ 30, 2012 က 10:38pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
သာဓု သာဓု သာဓုပါ..အားလုံးရဲ့အလှူတွေအတွက် ၀မ်းမြောက်စွာသာဓုခေါ်ပါတယ်
လှိုင်ကျော်ထွေး သည်ှဧပြီ 30, 2012 က 5:20pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
(၃၀.၄.၂၀၁၂)ရက်နေ့အထိ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာသာသနာဟိတ အသင်းအတွက်ကောက်ခံရရှိသော အလှူငွေစုစုပေါင်းမှာ=၁၇၇၆၀၀၀/-(ကျပ်တစ်ဆယ့်ခုနှစ်သိန်းခုနှစ်သောင်းခြောက်ထောင်တိတိ) နှင့် အင်ဒိုနီးရှား ရူပြား=၉၀၀၀၀၀/-
လှိုင်ကျော်ထွေး သည်ှဧပြီ 30, 2012 က 4:32pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
ဒေါ်မေကျော့ရှင်း (ကလေးတို့ဆရာမ) ဘန်ကောက်မှ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာသာသနာဟိတ အသင်းအတွက် မတည်အလှူငွေကျပ်= ၅ သောင်းတိတိကို လှူဒါန်းမှုအတွက် ၀မ်းမြောက်နုမော် သာဓု-သာဓု-သာဓု ခေါ်ဆိုအပ်သည်။
လှိုင်ကျော်ထွေး သည်ှဧပြီ 29, 2012 က 10:05amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
ကျနော် ဖတ်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ တနင်္လာနေ့မှ မနှင်းယုစံနဲ့ ဆက်သွယ်လိုက်ပါမယ်နော်။ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့၍ အစစအဆင်ပြေပါစေ။
ကလေးတို.ဆရာမ သည်ှဧပြီ 27, 2012 က 10:18pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
ကိုလှိုင်ကျော်ထွေးကို စကားဝိုင်းမျာ ရေးပေးခဲ့တာ ဘတ်ရလားမသိဘူး ။
တနင်္လလာနေ. မနက်မှာ ရန်ကုန်ပြန်မယ့် ဦးလှအောင်ရုံးက မနှင်းယုစံ ကို
ကျပ် ၅ သောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ။ အင်္ဂါနေ.က ရုံးပိတ်ရက်ဆိုတော့ တနင်္လာနေ. နေ.လည်ပိုင်းလောက် ဖုံးဆက်ကြည့်နော်။
ဦးလှအောင်က သူ.အဖဆုံးလို. ပြန်သါားပါတယ် ။ နှင်းယုစံဖုံးနံပါတ် ပေးထားပြီးပြီနော်။
လှိုင်ကျော်ထွေး သည်ှဧပြီ 23, 2012 က 11:25amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
(သာသနာဟိတ)အသင်းအတွက် အလှူရှင်တစ်ဦးက တစ်ခါအလှူငွေထည့်ဝင်တိုင်းမှာ(နေ့စွဲ့ နှင့် တကွ၊ အချိန်) ကိုဖော်ပြဖိုဆိုတာတော့ သိပ်အဆင်မပြေလောက်ဖူးခင်ဗျ။ အလှူရှင်တွေက ရပ်ဝေမြေခြားဖြစ်နေကြတော့ ငွေလွဲပို့လှူဒါန်းလိုက်ပေးမယ့် ကျနော်က အဲဒီအချိန်အဲဒီရက်မှာ အလှူငွေအားလုံးကို ငွေကိုလက်ခံရရှိနိုင်ခြင်း ရှိမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ နောက်..ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အကျိုးတော်ဆောင် အချို့က အလှူခံဖြတ်ပိုင်းဘောက်ချာ စာအုပ်တွေနဲ့ အလှူငွေကောက်ခံနေတာတွေလည်း ရှိနေသေးတယ်လေ။ ယခုအချိန်အထိ(ရရှိထားငွေပေါင်း)ကိုတော့ အနီးစပ်ဆုံး ဖေါ်ပြပေးလို့ရပါတယ်။ အဲဒီကောက်ခံရရှိသည့် အလှူငွေစုစုပေါင်းကို နေ့အလိုက်မဟုတ်ပဲ လအလိုက် ဖေါ်ပြပေးသွားပါ့မယ်။ အခုလိုအကြံပြုတာ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ..။ ကျနော်တို့တစ်တွေ သာသနာ့အကျိုးအတွက် ဆက်လက်ချီတက် ဆောင်ရွက်ကြတာပေါ့နော်။ အစစအဆင်ပြေပါစေ
လှိုင်ကျော်ထွေး သည်ှဧပြီ 23, 2012 က 11:05amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
အရင်တခါက လွှဲပိုလှူဒါန်းလိုက်တဲ့ ဦးလှအောင်ရုံးခန်းကို လွှဲပို့လိုက်ပါ။ အဆင်ပြေပါတယ် ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ကျနော်သွားရောက်ထုတ်ယူပါ့မယ်။ ကျေးဇူးပါ။ အစစအဆင်ပြေပါစေ။
ကလေးတို.ဆရာမ သည်ှဧပြီ 11, 2012 က 1:45pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
သာဓု -သာဓု - သာဓုပါ ။
ကိုလှိုင်ကျော်ထွေးရေ ဒီသင်္ကြန်အတွင်းမှာ မိသားစုအနေနဲ.
ကျပ် ငါးသောင်းလှူဖို.(ကျပ်ငွေ) အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံခြားဘဏ်က ကျပ်ငွေလက်မခံလို. သမီးမရတနာတို.ရုံးမန်နေဂျာ
ဦးလှအောင်ဆီကိုပဲပို.ပေးရမယ်ထင်ပါရဲ့ - ဘယ်လိုပို.ရမလဲ မေးလိုက်အုံးမယ်နော်။
than htike soe သည်ှဧပြီ 11, 2012 က 1:16amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
လှိုင်ကျော်ထွေး သည်ှဧပြီ 10, 2012 က 2:35pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
မမြင့်မြင့်စန်း (ခေတ္တ-USA) မှ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာသာသနာဟိတ အသင်းအတွက် မတည်အလှူငွေကျပ်=၅သောင်းတိတိကို လက်ခံရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ...။ လှူဒါန်းမှုအတွက် သာဓု-သာဓု-သာဓု ခေါ်ဆိုအပ်သည်။
(ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ် တည်ထောင်ခြင်း(၁)နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အလှူ) မှတ်တမ်း